Author: Gror Tojasho
Rasuulka Allaan maqlay bluuqul hadalkan lohoo yiri najaas ma aha oo waxay ka mid tahay inta idinku dhex warwareegaysata ee idinku naban. Habka aan casharada u diyaarinay: Marama hadday biyahaasu meeshay gaaraan ay sii nijaasaynayaan ku shuba lama dheheen oo nijaastii bay sii fidinayaan.
Qeyrkoodna xadiiska waa weriyeen oo isaguna waa saxiix. Taasi waxay keentay inaan sidan u soomaaliyeyno:. Markaa xayawaanaadka bad ku noosha ah gawrac uma baahna siday doontaba xalaal weeye kaasuna wuxuu la mid yahay Alle- subxaanahuu wa tacaalaa- markuu yiri: Maadaama ay dikri tahayna sideeda in loo adeegsado ayaa fiican.
Ibn Cabbaas hooyadiina waxaa la dhihi jirey Lubaabah bint al Xaaris al Hilaaliyah- radiyal Laahu canhum dhammaantood- Markaa Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- biyo ay Maymuunah janaabo kaga qabeysatay yuu uga dambeeyey suu janaabadii kaga qabeystay. Maxaa yeelay ninkaasi haddii kaadida lagu gooyo dhib baa ka dhalanaya; isagana dhib baa uga dhalan lahaa oo waa xanuusan lahaa, kaadidiina inaanu xajisan karin oo uu waayeel ahaa baa suuroowda, markaa kolkuu la kaco oo uu cararo meel kale na sii gaarsiiyo, marka mafsadadaa badan lahayd.
Laakiin waxaa inoo imaan doona laba arrimood oo xadiiskaas, laba qeyd u kala xiri doonta. Abuu Qataadah- radiyal Laahu canhu- ayaa guriga wiilkiisa soo galay, wiilkiisu gabar uu qabey oo la dhihi jirey Kabshah bint Kacab ibn Maalik- radiyal Laahu canhumaa- ayaa u soo shubtay biyo weysoqaad ah.
Xadiiskanina markaa xadiiskii labaad ee Abuu Saciid Al Khudrii ayuu shardi ku kordhinayaa bulyuqul biyaha Nebigu- sallal Laahu calayhi wacalaa aalihii wasallam- [ka yiri]: Kalamadahan oo kale waxaan ku bedelnay sida caadi ahaan loo qoro Af Soomaaliga: Buluuquo arrintaasi ay ku dhacday ee cudurkaa qaba kol hadday noqotay mid aan la garanayn in eyda kale laga sooco mid aad u culus ay tahay, illeen arrintaasi waxay u baahan tahay wakhti dheer iyo baaris dheer iyo qalab aanay dadkoo dhani wada heli karin.
Qaar badan oo ukumahaas yaryar ka mid ah baa waxay ku dhegayaan oo ku harayaan timaha dabadiisa hareeraheeda ku yaalla kolkaa eyga iyo bisadiyo waxaa biluuqul ogyahay waa is leefaanoo wixii wasakhee ku yaaliyo carrabkooday iskaga suuliyaan, markaa eyga hadduu dabadiisa meelahaa uu leefo waxaa afkiisa iyo carrabkiisa usoo gudbeysa ukumihii yaryaraa ee meesha ku yaallay haddii uu eygii markaa weel afka geliyo ama biyo uu cabbo ama qof uu afka ka dhunkado sida gaaladu yeelaan iyo sida ferenjiga iyo inta ku daydaa ay yeelaan weeyaane waxyaalahaas eyga afkiisa taabtay yaa ukumihiisi ay soo raacayaan.
Markuu saxaroodo eygu ukumo yaryar oo dixrigaasu uu leeyahay oo aad iyo aad u fara badan ayaa soo baxaysoo saxaradiisa soo raacaysa. Xadiiska dacfi baa ku jira buu leeyahay laakiin daciif ma aha. Xadiiska markaa isaga macnihiisu waxaa weeyaan eygu weelkuu afka la galo inuu nijaasoobayo weelkii iyo sharaabkii ku jireyba.
Waxaa saxiix yeelay Tirmidi iyo Ibn Khusaymah. Markaa Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- middii yarayd ayuu doortay oo ahayd inay kaadida nijaasta ahi meeshaa keliya ku koobnaato meeshiina la daahiriyo. Waxaana saxiix yeelay Albaanii: Laakiin qofka isagoo wax garanaaya edeb darro iyo ciyaala-suuqnimo u samaynaya buluuuqul, qofkaas marka in lagu xanaaqo oo la adbiyo buu mudanayaa, ka jaahilka isaga in tartiib wax loogu sheego oo loo tartiibiyo ayuu mutaa isagu.
Hadday iskula qabeystaan inay bannaan tahayna iyaduna waxaa imaan doona xadiis kale. Sir Alle uu Rasuulkiisa ogeysiiyey yaa meesha iskaga jirta, markaa waxyaalaha kale ee mustaxdathaatka [la sameeyey] ehee sanaacaatka ihi wax la mid ahoo wax lagu nadiifiyaa wey jiri jireen berrigoodii hore, Ashnaan geed la yiraahiyo oo wax lagu dhaqan jiriyo baa iska jira saabuunina waa jiri jirtey. Labada bakhti ayixii iyo mallayga weeyaan.
Saasuu masalada xukunkeedu noqonayaa. Waxyaalahay ku andacoodaanna waxaa ka mid ah: Saydul baxri markaa waxaa lagu fasiray waxa badda laga soo qabsado, dacaamkiisana waxaa lagu maraxm waxa isaga oo dhintay oo badda dul sabbaynaya ama xeebteeda yaalla lasoo qabsado.
Sidaas ayey culumadu sheegeen inay habboon tahay- sallal Laahu calayhi wasallam- taas ayaana sharci ahaan sugan. Sharax Xadiiska dacfi baa ku jira buu leeyahay laakiin daciif ma aha.
Rasuulkii Alle- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu yiri:. Markaa xayawaanaadka bad ku noosha ah gawrac uma baahna siday doontaba xalaal weeye kaasuna wuxuu la mid yahay Alle- subxaanahuu wa tacaalaa- markuu yiri:.
Af Soomaaliga la qoro iyo Af Soomaaliga dadka bjluuqul badani ku hadlaan way kala gedisan yihiin, tanina waxay sababtay inaan isku dayno inaan waxoogaa yara hagaajino qoraalkii aan cajaladaha ka qornay anagoo yaranayna isbedel ku yimaada sheekha hadalkiisa. Markaa sidaa macnaheedu waxaa weeyaan biyaha wixii bedelaayu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene inay nijaasaynayaan.
Xadiiskani qisuu lahaa oo qisaduu lahaa waxay ahayd: Sharax Xadiiska waxaa ka horreeyey xadiiskii nahyinaayey in nin uu ku qabeysto biyo ay soo hambaysay oo kasoo hadhay haweeney ama haweenay ay ku qabaysato biyo nin kasoo hadhay [Xadiiska 6aad].
Markaa sidaa macnaheedu waxa weeyaan biyihii haddii lagu kaajo fadhiyey inay saa ku nijaasoobayaan, waa inayse maraaam yihiin biyo yar oo qullataynka ka yar.
Leave a comment on BULUUQUL MARAAM PDF